Riyale Xaamud, oo ku Biiray Mucaaradka Jabuuti – Rasaasa News
Feb 8, 2011 Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ogaden peace, ONLF, onlf peace, oo ku Biiray Mucaaradka Jabuuti, Riyale Xaamud, Somali
London, Jan 8, 2001 [ras] – Riyaale Xaamud Axmed, oo mar ahaan jiray madaxweyne ku xigeenka Dawlad Gabaleedka Somali Itobiya, ayaa kolkii uu doorashadii ku waayey kursigii M/weyne ku xigeenimada shan sano ka hor, ku biiray kooxda caasmara ee Jwxo-shiil.
Riyaale Xaamud waxaa uu ka mid ahaan jiray masuuliyiintii Jabhadii Somali Galbeed sanadkii 1977, isaga oo xiligaas ka mid noqay dadkii ay Somaliya Jabhadaysay ee Mushaarka ku qaadan jiray magac Jabhadeed.
Burburkii dawladii Somaliyana Riyale waxaa uu ku soo laabtay magaalada Dire Dawa oo ah halka uu ku dhashay. Muddo ka dib waxaa uu ka mid noqday Jabhad lagu magacaabay Dal oo lagu sameeyey dalka Jabuuti sanadkii 1992, kana mid ahayd 12 Jabhadood oo ay Itobiya ku samaysay magac qabiil si loogu burburiyo ururkii ONLF, oo isagu markaas ahaa ururka ugu weyn mudana jiray.
Riyaale waxaa uu ka mid ahaa, dadkii ugu madax adkaa kolkiila yidhi war dagaalka qabiil joojiya ciisow kunasoo biira ururka ONLF.
Kolkii ururka ONLF uu ku guulaystay doorashadii Dawlada Gabaleedka Somalida Itobiya ee sanadkii 1993. Riyaale waxaa uu ka mid ahaa dadkii ururka ONLF kula dhex dagaalamay dawlada Itobiya, waxaana uu wax ka soo dhisay ururkii leegada ee minjaxaabiyey ururka ONLF.
Riyaale kolkii uu shaqo ka waayey Itobiya, waxaa uu aaday dalka Jabuuti, oo ay madax ka yihiin saaxiibadiisii Iskuulka Dire Dawa. Riyaale waxaa uu filayey in lagu soo dhawayn dalka Jabuuti dhalasho, madaama uu shaqo ka waayey Itobiya, nasiib wanaag masuuliyiinta Jabuuti way shakhsiyad yaqaanaan Riyaale Xaamud.
Riyaale waxaa uu damcay in uu Jabuuti dhexdeeda ka abaabulo mucaarad, wayna u shaqayn wayday arintaasi, waxaa kale oo uu damcay in uu helo dad reer Jabuuti ah si uu mucaarad dibada uga sameeyo, taasina way u shaqayn wayday.
Hadaba, kolkii uu meel uu cuskado waayey wuxuu dan mooday in uu ku biiro mucaarad aan meela haysanin oo ay Eritrea masaariifto, sariftana lafihii ururka ONLF.
Riyaale sanadkii tagay, ayey xukuumada Eritrea ka soo dhoofisay dalka Kenya, waxaana la keenay dalka Sweden oo uu hada qaxooti ku yahay.
Warar dhab ah oo aanu ka helay London, ayaa sheegaya in Riyaale Xaamud uu ku biiray mucaaradka dalka Jabuuti, ee fadhigiisu yahay dalka Ingriiska. Mucaaradka Jabuuti ayey isaga hooseeyaan Cabdiraxmaan Boore oo ah Gudoomiye, Geel-qaad Gudoomiye ku xigeen iyo Riyaale oo ah xoghayaha mucaaradka Jabuuti. Wali lama faafin magacyada xubnaha mucaaradka rasmiga ah ee Jabuuti, laakiin warkan waxaan ka helay xubno ka mid ah mucaaradka.
Riyaale Xaamud oo wata seef laba aflaha, ayaa waxaa uu baryahan abuurayaa, arimo been ah oo ayna waxba ka jirin, isaga oo kooxda Jwxo-shiil, ee uu ku danaysanayo ka dhaadhiciyey in dad Ogadeen ah oo mucaarad ah ay Jabuuti ku celisay Itobiya. Dadkaas oo sida uu sheegay ay jidh dileen ciidanka Jabuuti ku sameeyeen, arintaas waxaa abuuray Riyaale iyo dad mucaarad ah oo reer Jabuuti ah, waxbana kama jiraan.
Degaanka Somalida Itobiya waxaa ka dhacday nabad waxaana markhaati arintaas u ah, war baahinta ku hadasha afka Somaliga oo maalin iyo habeenba baahisa wararka dhabta ah.
Dalka Jabuuti oo ah dal nabdoon lehna dhaqaale, ayaa waxaa si sharcidaro ah sanad walba u soo gala dad badan oo ka kala yimaada geeska Afrika. Dadkaas oo sharcidaro ku yimaada Jabuuti, sanad walba waxaa la celiyaa kumanaan ka mid ah, iyaga oo dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen.
Hadiiba ay jiraan dad u dhashay gabalka Ogaden oo si gaar ah loo takooray, waxaa la heli lahaa magacyada dadkaasi waxaana arinta ka hadli lahaa masuuliyiinta DDSI iyo ururada caalamiga ah.
Hadalada beenta ah ee mucaaradka Jabuuti iyo kooxda Jwxo-shiil fidinayaan, waxaa muhiim ah in ayna rumaysanin dadweynaha aan la soconin beenta shakhsiyaadka danaysanaya ee uu ugu horeeyo Riyaale Xaamud.
Riyaale boqol wajiile, hadii uu nafleeyaha kaligii kama soo dhax baxeen ummada Ciisaha ee sharafta leh ee ku nool Jabuuti iyo Itobiya. Arimaha uu maanta wado Riyaale, waxaa weeye sidii uu dab u galin lahaa dadka reer Jabuuti ee nabdoon isaga oo isticmaalaya magaca dadka Ogadeenka.
Madaxweynaha Gabalka Somalida Itobiya oo Addis Ababa Saaka Tagay